किन ख़ौरीन केकीले कपाल हेर्नुहोस्, यस्तो रहेछ कारण – ramechhapkhabar.com
किन ख़ौरीन केकीले कपाल हेर्नुहोस्, यस्तो रहेछ कारण
काठमाडौं, २ चैत्र ।
काठमाडौं– अभिनेत्री केकी अधिकारीले चैत १ गते आईतबार साँझ आफ्नो इन्स्टाग्रामको स्टोरीमा केही भिडियोहरु अपलोड गरिन् । उनका ती भिडियो स्टोरी देख्ने बित्तिकै अधिकांशले अचम्म मानेको हुनुपर्छ, किनभने भिडियोमा केकीलाई अहिलेसम्म नदेखिएको रुपमा देखिएको छ । अर्थात उनको टाउकोमा कपाल नै छैन ।
उनले कपाल खौरेकी छिन् । इन्स्टाग्राममार्फत उनले आफ्नो कपाल खौरिएपछिको नयाँ लुक्स सार्वजनिक गरेकी हुन् । कपाल किन खौरिएको भनेर केही नबताए पनि उनले आफ्नो आगामी प्रोजेक्टमा फरक भूमिकामा देखिने संकेत दिएकी छन् । पहिलो भिडियोमा उनले क्याप्सन लेखेकी छिन् –’चेञ्ज इज ब्यूटिफूल, बाल्ड इज ब्यूटिफूल ।’
तेस्रो भिडियोमा उनले लेखेकी छिन् –‘ह्वाइ, ह्वाइ नट ? अन्तिम भिडियोमा उनले युवतीहरु मुडुलो कपालमा झन् बोल्ड हुने आशय व्यक्त गरेकी छिन् । अभिनेत्री अधिकारीले कपाल मुडुलो पार्ने कारण भने खुलाएकी छैनन् । यद्यपि यतिबेला उनी ‘बोक्सीको घर’ फिल्ममा सक्रिय छिन् । उक्त फिल्म तीन वर्षअघि मण्डला थिएटरमा मञ्चन भएको नाटक ‘बोक्सीको घर’ मा आधारित छ ।
यो फिल्ममा केकी नै प्रमुख भूमिकामा छिन् । फिल्ममा आफूलाई पृथक शैलीमा प्रस्तुत गर्नकै लागि केकीले कपाल खौरिएको अनुमान गरिएको छ । जुनसुकै कारणले कपाल खौरिए पनि केकीको यो साहसलाई हाम्रो पनि सलाम ।
मनिषा कोइराला अब गायिका पनि !
महाशिवरात्रिको अवसर पारेर अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले महामृत्युञ्जय मन्त्र सार्वजनिक गरेकी छिन् । सार्वजनिक महामृत्युञ्जय मन्त्र गायनमा मनिषालाई सुरेन्द्र श्रेष्ठ र सरस्वती खत्रीले साथ दिएका छन् ।
सार्वजनिक गरिएको ‘महामृत्युञ्जय मन्त्र’मा राजीव श्रेष्ठको सितारा, प्रेम रानीको बाँसुरी र विकास श्रेष्ठको गितार सुन्न सकिन्छ । महामृत्युञ्जय मन्त्र संस्कृत भाषामा नै रेकर्ड गरिएको छ ।
महामृत्युञ्जय मन्त्रको भिडियो पाटन दरबारमा छायांकन गरिएको छ । राम्रो स्वास्थ्यका लागि आफूले यो मन्त्र तयार पारेको मनिषाले बताएकी छन् ।